“Cali Samatar Jariimaddii uu Galay Way ka Culus Tahay In Lagu Sheego Gacan ku dhiigle Kaliya” |
Muqdisho(GNN)-Dawladda itaalka daran ee Soomaaliya, ayaa khamiistii la soo dhaafay magaalada Muqdisho aas qaran ugu samaysay gacan ku dhiigle Maxamed Cali Samatar oo 20-kii bishan ku geeriyooday magaaladda Virginia ee dalka Mareykanka.kaasi oo qirtay masuuliyadda xasuuq baahsan oo lagu dilay in ka badan konton kun oo muwaadiniin rayid ahaa oo u dhashay Somaliland oo amarkiisa lagu dilay dabo-yaaqadii sideetameedyadii.
Waxa kale oo uu masuuliyaddeeda lahaa burburkii baahsanaa ee lagu burburiyay magaalooyinka waaweyn ee Somaliland.
Maxamed Cali Samatar oo ahaa Madaxweyne ku-xigeenkii Taliskii afweyne ee Soomaaliya, isla markaana ahaa masuulkii ugu derajo sarreeyay ciidamaddii Soomaaliya.
Aaska Gacan ku dhiigle Cali Samatar waxaa ka qeyb galay Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, Ray’sal wasaarihiisa iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cismaan Jawaari Madaxweyneyaasha Maamul goboleedyada qaarkood iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan dawladda ciidamadda midowga afrika ilaaliyo ee Muqdisho. Waxaana lagu aasay xarunta wasaaradda Gaashaan-dhiga, iyagoo u aqoonsan inuu yahay masuul wakhti dheer u shaqeynayay Soomaaliya.
Haddaba qaabka aaska gacan ku dhiiglahan ay u buun-buunisay dawladda Muqdisho, waxa ka xumaaday shacbiga Somaliland oo u haysta inuu ahaa masuul shacbigii uu u dhaartay si arxan darro ah u xasuuqay oo masuuliyadda hadimadii uu geystay EEBE kula xisaabtami doono.
Dad badan ayaa ku baaqay in dawladda Somaliland ay ka baxdo wada hadalada ay kula jirto Dawladda aan cagaha ku taagnayn ee Soomaaliya oo ay ku eedeeyeen inay “Dhagar-qabe u aqoonsadeen halyey qaran.”
“Aaska qaran ee dawladda Soomaaliya u samaysay gacan ku dhiigle Cali Samatar oo ahaa ninkii qirtay xasuuqii uu u geystay shacabkii reer Somaliland. waxaan u arkaa daandaansi reer Somaliland iyo inay u aqoon sadeen geesi qaran,”ayuu bartiisa face-book ku sheegay Cabdi-qani Salaf oo ka mid ah dhalinyarrada Somaliland,
Cabdi-qani oo hadalkiisa sii watay waxa uu intaas ku daray “Arrintaasi waxay caddaynaysaa inay Soomaliya raali ka tahay, kuna faraxsan yihiin xasuuqii loo geystay reer Somaliland. Haddaba waa in aan cambaareynaa isla markaana wada hadalada la sheegayo lagaga baxaa Soomaaliya.”
Sidoo kale, Faysal Cali oo isna ka dareen celiyay aaska Maxamed Cali Samatar, ayaa yidhi “Xataa gacan ku dhiigle wuu ka culus yahay jariimadii uu ka galay shacabka Somaliland. waanan ka soo hor jeedaa in gacan ku dhiigle kaliya lagu sheego. Waayo waxa uu gumaaday mujtamac dhan.”
Muwaadiniin reer Somaliland ah oo ka mid ahaa dhibbaneyaashii dadkooda ku waayay xusuuqii nidaamkii Siyaad Barre, ayaa Maxamed Cali Samatar Maxkamad Maraykanka ku taalla u gudbiyay dacwad ay ku doonayeen in sharciga lagu mariyo iyadoo Maxkamadaasina ay ku qanacday dacwadii loo gudbiyay oo ay bayaamisay in lagu Maxkamadeyn karo Maraykanka gudihiisa.
Haddaba, aaska qaran ee Xasan Sheekh iyo kooxdiisu ku maamuustay Dambiile qaran Cali Samatar, waxay ummadda reer Somaliland u caddaynaysaa in Soomaaliya ku wada socoto xasuuqii laga gaystay gayiga Somaliland ee lagu gumaaday boqolaalka kun ee rayidka ahaa ee aan waxba galabsan isla markaana dalkooda lagu bur buriyay.